म्याट कालो बाथरूम नल व्यापक
घर / बाथरूमको नल / डबल ह्यान्डल बाथरूम नल / WOWOW मैट कालो दुई-ह्यान्डल व्यापक बाथरूम नल
WOWOW मैट कालो दुई-ह्यान्डल व्यापक बाथरूम नल
रेटेड 4.875बाहिर आधारित 23 मूल्यांकन ग्राहक
नल कोटिंग म्याट कालो प्लेट गरिएको छ, जसले सतहलाई क्षय र जंगबाट बचाउन सक्छ।
सिink्क पानी र ड्रेन आपूर्ति नली बन्डलमा समावेश छन्। तपाइँको भलाईको लागि प्रिमियम स्टीलको सामान प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहोस्
तापमान नियन्त्रण - पानीको तापक्रम र सिधा पानीको प्रवाहको साधारण नियन्त्रणको लागि दुई-ह्यान्डल लीभरहरू
सजिलो सेटअप - स्थापनाको लागि तैयार सबै कम्पोनेन्टहरू पनि समावेश छन्।
2321300B स्थापना निर्देशन
H प्वाल माउन्ट चौडा स्नानगृह नल २3१2321300०० बी-एएमयूएस: '' '- १ 6' 'बीच समायोज्य दूरी; प्वाल आकार: --२ - mm 14 मिमी / १.२32 - १. '' '
क्रिएटिभ क्विक कनेक्ट टेक्नोलोजी: प्लम्बर बिना नै आफैले स्थापना गर्न सजिलो, पप अप ड्रेन असेंब्लीसँग आउँनुहोस्। वाह FUCET को साथ प्लम्बिंग स्थापना शुल्क बचत गर्नुहोस्
कालो २-ह्यान्डल स्नान नल: अद्वितीय म्याट कालो सतह, क्लासिक र सरल, दैनिक प्रयोगको माध्यमबाट क्षय र कलंकको प्रतिरोध गर्नुहोस्, भाडाको घर, कन्डो, अपार्टमेन्ट, लभेट्री, व्यावसायिक प्रयोग, होटल फिट
चुहावट मुक्त लीड-फ्री बेसिन नल: उच्च सील एनएसएफ सिरेमिक कार्ट्रिज र पानी बचत एबीएस एरेटरले कुनै चुहावट र सीसा सुनिश्चित गर्दछ, यस बीचमा हल्का, स्थिर पानी प्रवाह थोरै प्रयास गरेर दुई ह्यान्डलहरू द्वारा नियन्त्रित गर्दछ
ग्राहक सहयोगको साथ लाइफटाइम वारेन्टी:-०-दिन निःशुल्क रिटर्न र आजीवन वारंटी द्वारा कभर गरिएको! कृपया सम्पर्क गर्नुहोस् EMAIL❤service@wowowfaucet.com
SKU: 2321300B-AMUS विभाग: बाथरूमको नल, डबल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: 8 Inch, काले, नाली
12.1 x 8.6 x3इन्च
मैले यसभन्दा पहिले उच्च मूल्यमा डेल्टा र फिशर faucets खरीद गरेको छ। WOWOW को उत्पादन म भन्दा धेरै को लागी गुणवत्ता, स्थापना को सजिलो र मेरो पैसा को लागी मूल्य को लागी अपेक्षा गरीरहेको छु। यो मेरो नयाँ बाथरूमको डूबमा अचम्मको देखिन्छ। यहाँसम्म प्याकेजि high उच्च श्रेणीको छ। मलाई ओ-रिंगहरू मनपर्दछ जुन ह्यान्डलको तलको भित्र निर्मित हुन्छ र चुहावट रोक्नको लागि। यसको साथ आएको फ्लेक्स एट्याच्मेन्ट नली पनि प्लग हो र कुनै चुहावट बिना खेल। म धेरै उत्पादन समीक्षा गर्दिन तर म यो उत्पादनसँग धेरै सन्तुष्ट छु कि मैले सोचे कि यो तपाईंसँग साझेदारी गर्नुहोस्।
मैले भर्खरै मेरो बाथरूमलाई पुन: निर्माण गरें जुन मेरो पुरानो बाथरूम सि cabinet्क र क्याबिनेटलाई डिक तर केही रेट्रो पेडेस्टल सिंकले बदल्नु समावेश थियो। यसको लागि नयाँ फ्याउट्स आवश्यक छ।
रिमोडेलको कारणले गर्दा मसँग अब काम गर्ने बाथरूम सिink्क थिएन। त्यसकारण, मलाई तत्काल नयाँ faucets को आवश्यकता भएकोले मैले ठूला चेन स्टोरहरू सहित स्थानीय हार्डवेयर स्टोरहरू खोजें। म आश्चर्यचकित र निराश भएँ कि उनीहरूसँग न केवल व्यापक व्यायाम बाथरूमको सीमाहरू मात्र थिए, तर ती सबैको लागत $ १०० भन्दा बढी भयो!
मैले निर्णय गरें कि म केहि दिनको लागि काम गर्ने सि without्क बिना जान सक्छु, र मैले केही राम्रो विकल्पका साथै राम्रो मूल्यमा पनि महसुस गरेको महसुस गरें;
मैले चाँडै धेरै नल भेट्टाए जुन मैले आफ्नो स्थानीय घर सुधार स्टोरहरूमा भेट्टाएको भन्दा धेरै कम मूल्य पोईन्टमा छनौट गरें। म यो नल विधानसभा मा बसे, र म खुशी हुन सकेन। नलको राम्रो सुन्दर निकल फिनिश हुन्छ, र स्थापनाको लागि सबै चीज समावेश गरिएको छ, दुई सस्तो छोटो होजहरू बाहेक जो पानी आपूर्तिमा जडान गर्न आवश्यक छ। मसँग एक साथीले मलाई पुन: निर्माणमा मद्दत गर्दै थिए, र हालले faucets स्थापना गरे। जे होस्, म पक्का छु कि म आफैंले यो गर्न सक्दछु, किनकि त्यहाँ भेला हुने केही अंशहरू मात्र थिए, र सचित्र निर्देशनहरू सीधा-अगाडि थिए र बुझ्न र अनुसरण गर्न सजिलो थियो। म faucets स्थापित र काम गरेको साथ मेरो नयाँ सिंक को एक तस्वीर पोस्ट गर्दैछु। म व्यापक रूपमा बाथरूमको नल असेंब्लीलाई यसको कारीगरीका लागि सिफारिश गर्दछु, यसको निर्माणमा प्रयोग गरिएको तामा, यसको सौन्दर्य र मलाई के महत्वपूर्ण लाग्छ - त्यो स्थापनाको सजिलो छ।
यस नल विधानसभा को एक अर्को सुविधा सि s्क को लागि "स्टपर" हो। यो यसमा तल थिचेर बन्द हुन्छ, र फेरि तल थिचिएर यो खुल्छ। मलाई विश्वास छ कि यो पुरानो प्रकारको स्टापर भन्दा ठूलो सुधार हो, जसको लागि तपाईंले लीभर खोल्न र बन्द गर्न यो आवश्यक पर्दछ। हुनसक्छ म अपवाद हुँ, तर मसँग कहिल्यै पुरानो प्रकारको थिएन जुन खराबी गरेन। वास्तवमा, प्राय: जसो मैले प्रायः यसलाई अस्विकार गरेको पाएँ। म पाउँदा साँच्चिकै खुसी छु, मलाई के लाग्छ, एक धेरै सुधारिएको स्टपर। यो केहि को लागी एक सानो र नगण्य सुधार जस्तो लाग्न सक्छ, तर हामी मध्ये जो पुरानो प्रकारको स्टपरको समस्याहरू समाधान गर्दछौं, यो स्वागत सुविधा हो।
मूल्यको लागि राम्रो गुण! फिनिस एकदम राम्रो देखिन्छ र यसको नल जस्तै कार्य गर्दछ। ग्राहक सेवा महान छ, पप अप नाली मेरो सिंक (धेरै छोटो) को लागी काम गर्दैन। मैले विक्रेतालाई ईमेल गरे र १० मिनेटमा तिनीहरू पुन: समाधानको साथ आए। उनीहरूले नयाँ नाली फेला पारे जुन लामो छ र नलको फिनिश / डिजाइनसँग मेल खान्छ, र मलाई नयाँ खरीद गर्न फिर्ती पठायो। नाली
यी केहि मसँग राम्रो चीजहरू छन् जुन मसँग खरीद छ, विशेष गरी यो मूल्य बिन्दुमा। तिनीहरू सुन्दर, स्टाइलिश छन् र मेरो नयाँ पुनर्निर्माण गरिएको बाथरूममा केवल शानदार देखिन्छन्। माथिको रिमोडलको लागि मैले अधिक महँगो सेट प्रयोग गरें र यो धेरै राम्रो देखिन्छ। इमानदारीपूर्वक, यो देखिन्छ Moen वा डेल्टा रूपमा राम्रो देखिन्छ तर 50०% भन्दा कम छ। म यस उत्पादनलाई सिफारिस गर्दछु।
म *** आर2020-06-11
यो नल अद्भुत छ! एक रिमोडल गर्दा मैले मेरो बाथरूम र भान्छाको लागि CHROME मा विभिन्न faucets को एक जोडी चयन गर्नुभयो। सामान्यतया यो भनाइमा तपाईले के भुक्तानी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सत्य होईन तर यस अवस्थामा हैन। मसँग यो मेरो बाथरूममा दैनिक प्रयोगको साथ6महिना भन्दा बढीको लागि भएको थियो र ती अहिलेसम्म मेरो मनपर्ने फिक्स्चरहरू हुन्। मसँग चुहावट, बडबड गर्ने ह्याण्डलहरू, पानीको चाप वा नलको साथ कुनै अन्य सामान्य गुनासोको कुनै समस्या छैन। यस नलको साथ शीर्षमा चेरी यो हो कि यसले पानीको दागहरू देखाउँदैन। मेरा सबै अन्य faucets सफा गर्नु पर्छ केहि दिनहरु नयाँ नयाँ देखिनको लागि तर यो होईन। म शाब्दिक दुई र आधा हप्ता जान सक्छ यसलाई तल पछाडि बिना वा स्क्रबिंग बिना र तपाईं भन्न पनि सक्नुहुन्न। म यी faucets संग प्रेममा छु। तिनीहरू गुणको हिसाबले मेरो प्राइस फिस्टरको नलसँग बराबर छन् तर तिनीहरू सबै समय राम्रै देखिन्छन्।
मैले यससँग उच्च माथिको बाथरूमको नल बदलें। द्रुत कनेक्ट होजहरूले स्थापनालाई एक ब्रीज बनायो र म वास्तवमै निर्माण गुणबाट प्रभावित भएँ र यो हाम्रो पुरानो भन्दा कत्ति राम्रो देखिन्छ। मैले सोचें कि मैले एउटा ब्राण्डमा एउटा मौका लिइरहेको छु जुन मैले पहिले सुनेको थिइनँ तर आधा मूल्यको लागि जुन मैले ठूलो बाकस हार्डवेयर स्टोरमा तिर्ने छ यो एक अविश्वसनीय मूल्य हो।
B *** ई2020-06-16
म भाँडामा छु र मेरो मालिकमा दुई नराम्रो नकल बदल्न एक टन खर्च गर्न चाहन्न। म वास्तवमै यी भन्दा बढी खुसी छु। गुणवत्ता शीर्ष खाच र स्थापना गर्न सुपर सरल छ। सधैं जत्तिकै, नयाँ स्थापना गर्नु भन्दा पुरानोलाई हटाउन यसले लामो समय लिन्छ ... सामान्यतया तपाईं गुणमा ग्रस्त हुनुहुनेछ जब तपाईं मानको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। समयले बताउनेछ, तर अहिलेसम्म यी पैसाको लागि शानदार रहेको छ।
म सामान्यतया केवल हाम्रो सुविधा मा ठूलो नाम ब्रान्ड नल प्रयोग गर्दछ। तर समीक्षा देखेपछि मैले एउटा प्रयास गर्ने निर्णय गरें।
नलको गुणस्तर, र स्थापना को सहजता संग धेरै प्रभावित। एकाई ठोस महसुस गर्दछ, र राम्रो निर्मित, र जडान ब्रेडेड स्टेनलेस थिए।
यस नललाई माया गर्नुहोस् !! एक महान मूल्य को लागी महान गुण। लोवको जाँच गरियो र उही नल एकको लागि $ ११। थियो। निश्चित रूपमा सिफारिस गर्नुहोस्!
सानो बाथरूम रिमोडलिंग गर्दा नयाँ नल फेला पार्नु पर्‍यो। यस सेटको स्लिक लुक मनपर्‍यो। मैले यसलाई म्याट्टै कालोको रूपमा खरीद गरेको थिएँ र केही अलि अधिक स्वाइरो टोनको आशा गरिरहेको थिए तर यो धेरै सुन्दर छ। बाथरूममा बाँकी हार्डवेयर त्यो खैरो र closerको नजिक छ तर म यससँग बस्न सक्छु। हाम्रो पुनर्निर्माणकर्ताले स्थापना कत्तिको सजिलो छ भनेर टिप्पणी गर्नुभयो। नलले यसको रूपमा काम गर्दछ त्यसैले म खुशी छु र मूल्य सही थियो।
यी faucets एक व्यक्ति द्वारा डिजाइन गरीएको थियो जो जान्दछन् कि उनीहरु के गरिरहेछन्। पानीमा बग्नेबाट रोक्न उनीहरूसँग प्रत्येक माउन्टमा ओभरिring मुहर वा गस्केटहरू छन्। स्थापना धेरै सरल र छिटो छ। सामग्री उच्च गुणवत्ताको हो त्यसैले तिनीहरू केवल राम्रो देख्दैनन् तर रस्ट पनि गर्दैनन्।
मैले मेरो अघिल्लो faucets एक स्थानीय हार्डवेयर स्टोरबाट धेरै उच्च लागत को लागी किनेको थियो, तर ती3बर्ष भन्दा पनि कम समय सम्म चले। त्यसोभए जब म तिनीहरूलाई लिन गएँ मैले फेला पारे कि नट भल्भमा खिया लागेको थियो र मैले त्यसलाई काट्नुपर्‍यो। स्पष्ट रूपमा भल्भको आधार वरिपरि राम्रो मुहर थिएन र नट सस्तो पदार्थबाट बनेको थियो जुन खियामा लाग्न सक्छ। किनकि यो क्याबिनेट भित्र थियो र पुग्न गाह्रो छ, यसमा घण्टा लाग्यो।
यसैले यो सेटको डिजाइन गरिएको तरीका र निर्माण सामग्रीका लागि प्रयोग गरिने सामग्री सामग्री देख्दा म साह्रै उत्साहित भएँ।
यो नल सही छ! यो कसरी देखिन्छ प्रेम गर्नुहोस्, स्थापना गर्न सजिलो, ठूलो भारी शुल्क गुणवत्ता। कुनै फिंगरप्रिन्टहरू छैनन्। हामी वरपर शपिंग गर्यौं तर १०० डलर खर्च गर्न चाहँदैनौं त्यसैले हामीले यसमा एउटा मौका लियौं र हामीले खुसीसाथ गरे। तपाईं निराश हुनुहुने छैन।
मैले यससँग पुरानो पुरानो पुरानो नल बदलें। म धेरै खुसी छु! यो एकदम राम्रो देखिन्छ र मलाई स्थापित गर्न धेरै सजिलो थियो !! अन्य पुरानो faucets प्रतिस्थापन गर्न म दुई अधिक किन्न योजना।
हामी पाँच स्नानगृह faucets प्रतिस्थापन गर्दै छन् कि यी भन्दा दोब्बर लागत। यी धेरै आकर्षक छन्, स्थापना गर्न अत्यन्त सजिलो छ र धेरै राम्रोसँग निर्मित छ। मलाई मात्र भन्नु पर्ने छ कि जे भए पनि एक नकारात्मक हो कि निर्देशनहरूले तपाईंलाई नाली पाइप थ्रेडहरूमा प्रयोग गर्न केहि पाइप थ्रेड सिलर किन्न भन्‍नु पर्छ। ड्रेन पाइप एउटा ओभरफ्लो प्वालको साथ सिंकका लागि डिजाइन गरिएको छ त्यसैले स्टपरको तलपट्टि प्वालहरू छन्, तल नट र गास्केटको बिच। थ्रेडहरू धेरै पाठ्यक्रम हुन् र मैले पत्ता लगाए कि पानी बग्ने बग्ने पानी ओभरफ्लो प्वालबाट बाहिर जान्छ र थ्रेडहरू मार्फत ड्रप हुन्छ र ड्रेट भित्र निकास पाइप समातेर। थ्रेड सिलरको साथ सजिलैसँग सच्याइन्छ। तपाईंलाई प्लम्बर पुट्टी प्रयोग गर्नका लागि निर्देशन दिइन्छ जहाँ नाली सि the्कको माथिपट्टि जडान हुन्छ, तर यो चुहावटको स्रोत होइन। थ्रेड सिलर पाउनुहोस्। IMO, तपाईं मूल्य मा यस नल संग गलत जान सक्दैन!
न केवल यस उत्कृष्ट नलको लागि मूल्य एकदम कम थियो, स्थापना गर्न यो धेरै सजिलो थियो। पप अप ड्रेन उत्कृष्ट छ। म आशा गर्दछु यो नल वर्षौंसम्म रहनेछ। ठूलो ईंट र मोर्टारबाट यस जस्तो एक तुलना नल यसको नलको भन्दा times गुणा खर्च हुन्छ। म अत्यधिक सिफारिश गर्दछु र निश्चित रूपमा फेरि खरीद गर्दछु।
जी *** डी2020-07-09
मैले यो २ bought वर्ष पुरानो नल बदल्नको लागि किनेको छु। स्थापना म जस्तो नौसिखिए DIY स्थापनाकर्ताको लागि पनि एक हावा थियो। केवल गाह्रो अंश भनेको पुरानो रिस्ट गरिएको नल हटाउनु थियो। आपूर्ति सजिलो कनेक्टर्स स्थापना एक विशेष रूप दर्दनाक चक्कर बनायो। एक मात्र गुनासो यो हो कि नल यो हल्का तौल सामग्रीबाट बनेको हुन्छ पुरानो नलको ठाउँमा बदलियो। समाप्त गरिएको उत्पाद स्लीकर र अधिक रमणीय देखिन्छ, तथापि।
एक स्नानमा स्थापना गरिएको दुर्लभ रूपमा प्रयोग गरिएको छ त्यसैले यससँग कुनै जीवन अनुभव हुनुहुन्न तर प्याकेज तपाईलाई आवश्यक भएको सबै भन्दा पूर्ण छ र यो राम्रो देखिन्छ, राम्रो देखिन्छ। स्टापर सामान्य स्ट्यार भन्दा स्टापर बढाउन र कम गर्नको लागि उपकरण बन्द गर्न पुश हो। म त्योसँग प्रेममा छैनँ तर तथ्य यो सरल छ र यो यसमा एक strainer छ त्यसैले यदि तपाईंले नालीमा केही छोड्नुभयो भने तपाईं पूरै स्टपर असेंब्लीलाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ र यसलाई पुनःप्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्यापर खोल्न / बन्द गर्न डण्ड नभएको नकरात्मक भन्दा यो अधिक हो।
यो नल देख्छ र हाम्रो बाथरूममा राम्रो काम गर्दछ। नोट गर्न एउटा चीजको साथ स्थापना गर्न सजिलो थियो। नलको साथ आउने द्रुत कनेक्ट होजहरू दृढतापूर्वक विस्थापित हुनुपर्दछ जब स्थापना गरिएको छ। मलाई लाग्यो कि मैले तिनीहरूलाई ठीकसँग जडान गरेको थिएँ तर जब पानी खोल्दा र नल खुल्यो, ती दुवै काटिए। सजिलो फिक्स गर्नुहोस्, होजहरू संलग्न गर्दा दृढतापूर्वक धक्का दिनुहोस्।
मसँग नलमा एरेटरको साथ सानो समस्या रहेको थियो र WOWOW ग्राहक सेवा अत्यन्त छिटो र उत्तरदायी भएको पाए। ठूलो कम्पनी, निश्चित रूपमा यो नल सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ।
एच *** s2020-07-26
भर्खर यो पाएँ र स्थापित गर्नुहोस्। यो स्थापना गर्न धेरै सजिलो थियो, उत्कृष्ट प्याकेजि and र धेरै राम्रो फर मूल्य। मैले खरीद गरेको र गैर बुद्धिमत्ता बुझ्नु अघि मैले धेरै समीक्षाहरू पढें। अहिले सम्म कुनै चुहावट छैन र यो राम्रो देखिन्छ। यदि केहि परिवर्तन भयो भने म मेरो समीक्षा पुन: लेख्छु। साथै, उत्पाद पाउने बित्तिकै मैले विक्रेताको ईमेल प्राप्त गर्‍यो। यसले भन्यो यदि कुनै समस्या छ भने म सीधा सम्पर्क गर्नु पर्छ। मैले भने जस्तो उत्तम छ। याद गर्नुहोस् यो पैसाको लागि उत्कृष्ट मूल्य हो।
हामीलाई यो नल मन पर्छ। पुश बटन ड्रेन प्लग एकदम राम्रो छ। ह्यान्डलहरू सजिलै मोडिन्छ र पानी ठूलो बग्दछ। मैले गरेको कूल बाथरूम पुन: निर्माणको लागि मैले यसलाई खरीद गरें र वास्तवमै यसलाई नदेखीकन अनलाइन त्यस्तै वस्तु खरीद गर्न चिन्तित भएँ। यो मेरो अपेक्षाहरु भन्दा बढि छ। यस खरीदको साथ एक महान उत्पाद र महान अनुभव को लागी धन्यवाद।
नल राम्रोसँग समाप्त भयो र राम्रा प्याक गरियो। स्पिगट सिinkक बेसिनमा राम्रो सेन्टरिंगका साथ डिजाइन गरिएको छ। पानीको घुसपैठ रोक्नको लागि ग्यासिंग र नल र स्पिगट मुनि फिटिंग राम्रोसँग सोच्दछन्। प्रयोग गरिएको सामग्री उच्च गुणस्तरीय देखिन्छ। पप अप ड्रेन र टेलपीस, जबकि प्रतिस्थापन गरिएको भन्दा मजबूत थिएन, पर्याप्त भन्दा बढी हुन्। स्थापना गाह्रो थिएन र समाहित हार्डवेयर सबै उपस्थित थिए। प्याकेजिंग प्रत्येक नलको साथ उत्कृष्ट छ र स्पिगोटलाई व्यक्तिगत रूपमा ब्याग गरिएको छ त्यसैले ट्रान्जिटमा खरोंचहरू देखा पर्दैन।
वास्तवमै राम्रो उत्पादन होम डिपोमा थियो र मैले मन परेको एउटा फेला पार्न सकेन र यसलाई WOWOW मा $ २० कममा फेला पारे। ईन्स्टिलेसन वास्तवमै सजिलो थियो र मैले वर्षौंदेखि केही सिks्क स्थापना गरें र यो एउटा सजिलो थियो। सबै कुरा धेरै ठोस लाग्यो, म वास्तवमा त्यो नाली संग आयो जो नल पछाडि माथि पुल छ कि एक भन्दा एक राम्रो छ कि यो संग आयो मनपरायो। म अर्को बाथरूम पुन: निर्माण गर्दा सम्भवतः अर्को प्राप्त गर्नेछ।
यो लीक भएको मेरो अवस्थित नल बदल्नको लागि खरीद गरें। यो स्थापना गर्न सजिलो थियो। पुरानो नल लिन र यस नयाँ स्थापना गर्न लगभग २० मिनेट लिन मलाई आधा घण्टा लाग्यो। यो पप अप ड्रेनको साथ पनि आउँदछ जुन मलाई पनि धेरै मनपर्दछ। तिनीहरू महान देखिन्छन्। मलाई थाहा छैन उनीहरू कति लामो समय सम्म रहनेछन्, तर म अहिलेको खरीदमा खुशी छु।